Daphne Caruana Galizia: Ra'iisul wasaare is casilaya ka dib xanaaq ka dhashay weriye la dilay - BBC News Somali
Daphne Caruana Galizia: Ra'iisul wasaare is casilaya ka dib xanaaq ka dhashay weriye la dilay
Ra'iisul wasaaraha Malta, Joseph Muscat, wuxuu telefishinka qaranka ee dalkaas ka sheegay in sannadka cusub uu xilka ka degayo, iyadoo ay jiraan khilaafaad ka dhashay dilka gabar weriye ahayd.
Dadka isu soo baxay waxay dalbadeen in ra'iisul wasaaraha uu si degdeg ah isu casilo, taas oo la xiriirtay sida loo baaray dilka Daphne Caruana Galizia.
Ra'iisul wasaaraha oo sharaxayay sababta uu xilka uga degayo wuxuu sheegay in ay tahay arrin la xiriirto sida loo maamulay baaritaanka dilka: "Go'aannada qaar waa kuwo fiican, halka kuwa kalena wanaagga dartii loo gaaro."
"Dhamman masuuliyadaha aniga i saaran culeyskooda lama barbardhigi karo xanuunka ay marayaan qoyska gabadha la dilay," ayuu hadalka ku daray.
"Malta waxay u baahan tahay bog cusub in ay bilowdo", ayuu yiri.
Mr Fenech waxaa sannadkii la soo dhaafay la ogaaday inuu yahay milkiilaha shirkad qarsoon oo Dubai ka diiwaan gashan oo ka mid ah 17-ka shirkadood ee diiwaanka madow lagu daray xilligii cadeyntii Panama - taas oo ahayd sir weyn oo la fashiliyay 2016-kii oo ku saabsanayd shirkadaha qarsoon ee dhaqaalaha badan haysta.
Lahaanshaha sawirka Getty Images for the Daphne Project
Image caption Caruana Galizia (sawirkeeda 1989) iyo saeygeeda iyo carruurteeda
"Waxaan caddaalad la tiigsanayaa ciddii dishay hooyaday"
Weriyaha la dilay qoyskeeda waxay sheegeen in ra'iisul wasaaraha wax badan loo tanaasulay, ayna tahay in uu xilka ka dego maadaama uu "ku fashilmay" in uu tallabo qaado si uu siyaasadda Malta u nadiifiyo, labadii sano ee la soo dhaafay.
Sidoo kale, wasiirka ganacsiga dalkaas, Chris Cardona, ayaa shaqada dib loogu soo celiyay ka dib markii uu isu casilay su'aalo ay booliska weydiiyeen. Wuuna beeniyay in uu wax dembi ah sameeyay.